फागुन १ र हाम्रो कार्यभार | चितवन पोष्ट दैनिक
फागुन १ र हाम्रो कार्यभार
२०७० फाल्गुन १, बिहीबार ०१:४६ गते
हुन त, नेकपाको गठन भएदेखि नै संसदीय व्यवस्था र नौलो जनवादी व्यवस्थाका बारेमा ठूलो र गहिरो बहस चल्दै आएकै हो । नौलो जनवादी क्रान्तिबारेको बहसमा पुष्पलालको भूमिका नेपाली सन्दर्भमा विशेष मह¤वपूर्ण छ । तर, उहाँले त्यसको व्यावहारिक प्रयोग गर्न सक्नुभएन । आजभन्दा २३ वर्षपहिले यसको व्यावहारिक प्रयोगका लागि चिनियाँ क्रान्तिपक्षधर चारवटा दलहरुकै पहलमा नेकपा (एकता केन्द्र) गरिएको थियो । त्यतिखेर जनवादी क्रान्तिको व्यावहारिक र सैद्धान्तिक पक्षबारे गहन छलफल चलेको थियो । यो बहस नेपालमा मात्र होइन कि संसारभरका पुँजीपति वर्ग र कम्युनिस्ट क्रान्तिकारीहरुका बीचमा चलिरहेको थियो । खासगरी, त्यतिखेरै सोभियत समाजवादी सत्ताको विघटनले पुँजीपति वर्गलाई उत्साहित बनाएको थियो । पुँजीपति वर्गले समाजवाद कहिल्यै नब्युँतिने गरी पतन गराइरहेको थियो भने कम्युनिस्टहरु समाजवाद वा साम्यवादको पतन होइन कि सोभियत संशोधनवादी सत्ताको विघटन भएको कुरा गर्दथे । जे होस्, तत्कालीन अवस्थामा पुँजीपति वर्ग आक्रामक थियो भने कम्युनिस्ट क्रान्तिकारीहरु रक्षात्मक अवस्थामा थिए । त्यसैले, तत्कालीन संयुक्त जनमोर्चाको नारा थियो– ‘संसदीय व्यवस्थाको विकल्प नौलो जनवादी गणतन्त्र ।’
प्रसंग २०५२ फागुन १ को ः
२०५२ साल मंसिर महिनादेखि नै नयाँ जनवादी क्रान्ति सम्पन्न गर्नका लागि जनयुद्धको तयारी र त्यसको राजनीतिक अनि सैद्धान्तिक पक्ष प्रचारप्रसार गर्न देशैभर विभिन्न नाममा अभियानहरु सञ्चालन गरिएका थिए । रोल्पा, रूकुमको सिस्ने–जलजला (सीज) अभियान र काठमाडौँ उपत्यकामा भक्तपुर, ललितपुर, काठमाडौँ (भलका) अभियान विशेष चर्चित अभियानहरु थिए । रोल्पा, रूकुममा हिंसात्मक गतिविधि र ठूलो कार्यकर्ताको उपस्थितिका कारणले चर्चित थियो भने उपत्यका देशको राजधानी भएको कारणले चर्चित थियो ।
काठमाडौँ उपत्यकामा सहरको बाहिरी घेरा ग्रामीण बस्तीमा अभियान सञ्चालन गरिएको थियो । त्रिभुवन विश्वविद्यालय क्याम्पसबाट म पनि सहभागी भएको थिएँ । त्यो अभियान करिब १ महिनासम्म चलेर भक्तपुरको गठ्ठाघरमा गएर सम्पन्न भएको थियो । त्यतिखेर सबै अनुहारमा उत्साह, जोश र जाँगरका चिन्हहरु सजिलै पढ्न सकिन्थ्यो । सबैमा हार्दिकता र आत्मीयतासहितको वर्गीय प्रेम थियो । सबैमा लिने होइन, दिनुपर्छ भन्ने चेत थियो ।
म, मुमाराम, रेखा शर्मा, रामहरिलगायतका साथीहरु त्रिभुवन विश्वविद्यालय क्याम्पसको विद्यार्थी समिति र पार्टी कमिटीमा थियौँ । म विद्यार्थी समितिको अध्यक्ष र पार्टी कमिटीको सेक्रेटरी समेत थिए । हितमान शाक्य पार्टी जिल्ला सेक्रेटरी थिए भने कृष्णध्वज खड्का विद्यार्थी केन्द्रीय समितिका अध्यक्ष थिए । म, मुमाराम, रामहरिलगायतका ६÷७ जना साथीहरु पाँगाको एउटा घरमा बस्थ्यौँ । रेखा शर्मा सहरतिर बस्नुहुन्थ्यो ।
२०५२ माघ महिनाको अन्तिम दिन रेखा शर्मा एक झोला पोस्टर बोकेर मेरो कोठामा आउनुभयो । राति १२ बजेपछि मात्र फागुन १ गते सुरू हुने हुनाले १२ बजेपछि उज्यालो नहुँदै पोस्टर टाँसी सक्नुपर्ने पार्टी निर्देशन थियो । फागुन १ गतेदेखि केही दिनसम्म मैले र मुमारामले आफ्नो डेरामा बस्न नहुने पार्टीको निर्देशन थियो । यी जानकारीसहित पोस्टर छोडेर रेखा शर्मा सहरतिर फर्किनुभयो । म र मुमाराम मेरो कोठामा बसेर आवश्यक योजना बनायौँ । खाना खाएपछि म र मुमाराम आवश्यक साथीहरुलाई सूचना गर्न हिँड्यौँ । त्यतिखेर सूचना सञ्चारको क्षेत्रमा निकै समस्या थियो । सबैका कोठाकोठामा गएर साथीहरुलाई सूचना ग¥यौँ । कोठामा आएर आवश्यक सामग्रीहरु तयार ग¥यौँ । सूचना गरेअनुसारका सबै साथीहरु बेलुका मेरो कोठामा जम्मा भयौँ । बेलुका १० बजेपछि सबै साथीहरु बाहिर निस्क्यौँ । पाँगाबाट सल्लाघारी, लेबोरेटोरी स्कुल हुँदै त्रिभुवन विश्वविद्यालयको गेटमा पुग्यौँ । त्यहीँबाट कार्यक्रम सुरू गर्ने हाम्रो योजना थियो ।
ठीक १२ बजेपछि हामीहरुले आफ्नो कार्यक्रम सुरू ग¥यौँ । करिब ५ बजेसम्ममा सबै काम सम्पन्न भइसकेको थियो । बिहानको खाना खाएर म र मुमाराम पाटनढोकानेर रहेको मेरी बहिनीको कोठाको ताला फोडेर भित्र बस्यौँ । त्यसदिन सिन्धुलीगढी प्रहरी चौकी, गोरखाको च्याङ्लीस्थित कृषि विकास बैंकमाथि हमला भएको रहेछ । त्यसैगरी, देशैभरि हजारौँ साना–ठूला प्रचारात्मक कारबाहीहरु भएका रहेछन् । मेरो मनमा तत्कालीन ने.क.पा. (माओवादी) का महामन्त्रीले उक्त कारबाहीहरुको जिम्मेवारी लिनुहुन्छ भन्ने आशा थियो, तर उहाँले जनताको विद्रोहलाई समर्थन गरेको वक्तव्य दिनुभयो । ती कारबाहीहरु नेपालको क्रान्तिकारी आन्दोलनको एउटा कोशेढुंगा थियो । यसले क्रान्तिकारीहरुमा ठूलो उत्साह, उमंग र आशावादिता देखाएको थियो । अवसरवादी चेत भएका तर क्रान्तिकारी जलप लगाएका कमरेडहरुमा ठूलो रूवावासी र भागदौड भएको थियो । नेपाली समाज शान्त पोखरीमा ढुंगा हान्दा तरंगित भएजस्तै तरंगित भएको थियो । मलाई लाग्छ, पार्टी नेतृत्वमा पनि भारतीय सहरतिर डेरा खोज्ने लहर चलेको थियो ।
एकातिर जनतामा अभाव र गरिबी, अर्कोतिर संसदीय दलका नेताहरुको सत्ता लुछाचुँडीका लागि भइरहेको सांसद् किनबेच, होटलभित्र सुरा र सुन्दरी, नेताहरुको विदेश भ्रमण, पार्टीहरुभित्रको घात–अन्तर्घातले राजनीतिक क्षेत्रभित्र ठूलो निराशा र आक्रोश पैदा भइरहेको थियो । संसदीय दलका नेताहरु सरकार बनाउन र चलाउन अक्षम हुन थाले । यसले जनताहरुको संसदीय दलप्रति नै वितृष्णा पैदा ग¥यो भने माओवादी विद्रोहप्रति आकर्षित ग¥यो । परिणामस्वरुप, जनताको ठूलो पंक्तिले विद्रोहलाई सहयोग र समर्थन गर्न थाल्यो । संसदीय दलको असफलताको फाइदा उठाई राजाले निरंकुश सत्ता सञ्चालन गर्ने मनोकांक्षा राख्न थाले । राजाले संसदीय दललाई समेत पाखा लगाई एकलौटी सत्ता सञ्चालन गर्ने प्रयत्न गरे । राजाको यो कदमले राजा र संसदीय दलको बीचको दूरी बढ्यो भने माओवादी र संसद्वादीहरुबीचको दूरी घट्न थाल्यो । अन्ततः सात संसद्वादी दल र माओवादीबीच १२ बुँदे सहमति बन्यो । गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा लोकतान्त्रिक आन्दोलनले तीव्रता लियो । त्यो आन्दोलनले सामन्ती राजतन्त्रको विधिवत् रुपमा अन्त भयो ।
विभिन्न समयमा भएका लोकतान्त्रिक आन्दोलनहरु ः
योजनाबद्ध र संगठित रुपले राज्यसत्ताको विरूद्धमा भएका लोकतान्त्रिक आन्दोलनमध्ये राण शासनविरूद्धको आन्दोलन अग्रणी आन्दोलन हो । त्यसैगरी, दिल्ली सम्झौताविरूद्ध, गण्डक र कोशी सम्झौताविरूद्धका राष्ट्रवादी आन्दोलन, विभिन्न समयमा भएका विद्यार्थी र किसानका आन्दोलनहरु, नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा विभिन्न समयमा शान्तिपूर्ण र हिंसात्मक आन्दोलन, २०२८ सालमा झापाका क्रान्तिकारी युवाहरुले पञ्चायती व्यवस्थाका विरूद्ध गरेका विद्रोह, २०३५÷०३६ सालमा विद्यार्थीको नेतृत्वमा भएको शान्तिपूर्ण आन्दोलन, शिक्षकहरुले गरेको आन्दोलन, २०४६÷०४७ सालमा भएको शान्तिपूर्ण आन्दोलन, २०५२ फागुन १ बाट सुरू भएको माओवादी विद्रोह, २०६२÷०६३ सालमा भएको लोकतान्त्रिक आन्दोलनहरु विशेष उल्लेखनीय आन्दोलनहरु थिए । तिनीहरुको उद्देश्य जे भए पनि तिनीहरुले सामन्ती राजतन्त्रलाई घाटा, लोकतान्त्रिक आन्दोलनलाई नै सहयोग पुगेको छ ।
नेपालमा भएका विभिन्न आन्दोलनमध्ये तीनवटा आन्दोलन निर्णायक भएका छन् । यद्यपि, तिनीहरुको विकास विभिन्न समयमा हिंसात्मक र शान्तिपूर्ण आन्दोलनबाट नै भएको हो । तिनीहरुमध्ये २००७ सालको आन्दोलन जसले १०४ वर्षे जहानियाँ राणाशासनको अन्त ग¥यो । २०४६÷०४७ सालको आन्दोलन जसले ३० वर्षे पञ्चायती व्यवस्थाको अन्त ग¥यो र राजाको अधिकारलाई सीमित बनायो । २०६२÷०६३ सालको आन्दोलन जसले २४० वर्षीय सामन्ती राजतन्त्रको अन्त गरी नेपाली समाजलाई संघीय गणतान्त्रिक समाज बनायो ।
यी तीनवटै आन्दोलनहरुमा विभिन्न दलहरु र सम्पूर्ण नेपाली जनताहरुको सक्रिय सहभागिता भए पनि नेतृत्व नेपाली कांग्रेसको नै थियो । राणा शासनविरोधी आन्दोलनको सुरूवात प्रजापरिषद्ले ग¥यो, पछि त्यसमा राष्ट्रिय कांग्रेस, नेकपा सहभागी भए पनि आन्दोलनको अन्तिम नेतृत्व नेपाली कांग्रेसले नै ग¥यो । त्यसैगरी, पञ्चायती व्यवस्थाको विरूद्धमा विभिन्न दलहरु, विभिन्न तह र तप्काका जनताहरुले ३० वर्षसम्म संघर्ष गरे । पञ्चायती व्यवस्थाको अन्तका निम्ति संयुक्त राष्ट्रिय जनआन्दोलन, संयुक्त वाममोर्चा निर्माण भए । सबै दल र मोर्चाहरु आन्दोलनमा सक्रिय रुपमा सहभागी भए । अन्ततः आन्दोलनको अन्तिम नेतृत्वकर्ता नेकाकै रह्यो । त्यसैगरी, माओवादीले १० वर्षसम्म विद्रोह ग¥यो । राजतन्त्रको विरूद्धमा ठूला–ठूला जनप्रदर्शनहरु पनि भए, १२ बुँदे समझदारी पनि बन्यो । अन्त्यमा, राजतन्त्रविरोधी आन्दोलनको नेतृत्व पनि नेपाली कांग्रेसले नै ग¥यो ।
यी तीनवटै निर्णायक आन्दोलनमा केही समान विशेषताहरु छन् । २००७ सालको आन्दोलनमा राणाहरुको पारिवारिक शासनको अन्त्य भएको थियो भने ०६२÷०६३ को आन्दोलनमा राणाहरुको वंशानुगत शासनको अन्त्य भएको थियो । २००७ सालको आन्दोलनको जगमा कांग्रेस नेतृत्वमा सशस्त्र संघर्ष भएको थियो भने ०६२÷०६३ को आन्दोलनको जगमा माओवादीको नेतृत्वमा सशस्त्र संघर्ष थियो । २००७ सालको आन्दोलनमा भारतको प्रत्यक्ष सक्रियता थियो भने ०६२÷०६३ को आन्दोलनमा पनि भारतकै प्रत्यक्ष सक्रियता थियो । सबै सहमतिहरु दिल्लीमा नै भएका थिए । फरक यति थियो कि ०६२÷०६३ को आन्दोलनमा भारतले माओवादी र संसद्वादीको बीचमा संयोजन गरेको थियो । यस्तैगरी, २००७ सालको आन्दोलनमा पनि राजा र कांग्रेसको बीचमा संयोजन गरेको थियो ।
४ फागुनको प्रभाव ः
तत्कालीन नेकपा माओवादीले आफ्नो नेतृत्वमा जनवादी क्रान्ति सम्पन्न गर्ने, जनवादी राज्य व्यवस्था स्थापना गर्ने, समाजवादको बाटो निर्माण गर्ने र समाजवाद हुँदै साम्यवादमा पुग्ने लक्ष्यका साथ छापामार युद्धको विकास गर्दै चलायमान युद्धमा पुगेको थियो । खासगरी, सेप्टेम्बर ११ को घटनापछि संसारभर साम्राज्यवादको एकछत्र रजाइँ चलेको भन्दै चुनवाङ बैठकको निर्णयद्वारा शान्तिपूर्ण रुपमा आन्दोलन गर्ने निष्कर्षमा पुगेको हो । उसले ‘संसदीय व्यवस्थाभन्दा माथि, जनवादी व्यवस्थाभन्दा तल’ जाने निर्णय ग¥यो । यसका लागि संसदीय दलहरुसँग सहकार्य गर्ने निर्णय ग¥यो । त्यसै निर्णयअनुसार लोकतान्त्रिक आन्दोलनले तीव्रता पायो र आन्दोलन सफल भयो । परिणामस्वरुप, सामन्ती राजतन्त्रको अन्त्य भयो ।
संसारभरका क्रान्तिकारी आन्दोलनहरुलाई हे¥यौँ भने खासगरी दोस्रो विश्वयुद्धपछि ती क्रान्तिकारी आन्दोलनहरुमा प्रतिक्रियावादीहरुको भीषण दमनद्वारा ध्वस्त हुने गरेका छन्, या त क्रान्तिकारी शक्तिको नेतृत्वले प्रतिक्रियावादीसामु आत्मसमर्पण गरेर आन्दोलन नै सिद्धिने गरेका छन् । नेपालको क्रान्तिकारी आन्दोलनलाई हेर्दा सामन्ती राजतन्त्रको अन्त्यसम्म आइपुग्दा सकारात्मक देखिन्छ ।
यही क्रान्तिकारी विद्रोहको कारणले नै नेपालका संसदीय दलका नेताहरुलाई गणतन्त्रसम्म आउने स्थिति पैदा गरेको हो । २००७ सालको संविधानलाई ‘संसारकै सबैभन्दा उत्कृष्ट संविधान’ ‘यसको कमा र पूर्णविरामसमेत परिवर्तन हुँदैन’ भन्दै राजाको पाउमा दाम चढाइरहेका थिए । यिनीहरुलाई लोकतान्त्रिक आन्दोलनको नेतृत्व गर्ने स्थिति पैदा गरेर गणतन्त्रसहितको लोकतान्त्रिक अवस्थामा पु¥याउनु कम मह¤वपूर्ण छैन । तर, गणतन्त्रमा पुगिसकेपछि फेरि प्राप्त उपलब्धिहरुलाई संस्थागत गर्ने काममा असफलता प्राप्त भएको छ ।
५. अबको कार्यभार ः
एकीकृत नेकपा माओवादीको हेटौँडामा सम्पन्न सातौँ महाधिवेशनले लिएको निर्णयअनुसार नेपालको पुँजीवादी जनवादी आन्दोलनका कार्यभार पूरा भएका छन् । एकीकृत नेकपा माओवादीको निष्कर्ष बिल्कुल सही छ । यतिमात्र होइन, उसले यो पनि भनेको छ कि अब संसद्वादी आन्दोलनको तयारी गर्नुपर्छ । यो कुरा पनि सही छ, किनकि वर्तमान अवस्थामा नेपाली नागरिकहरुलाई जनवादी क्रान्ति सम्पन्न भएपछि चिनियाँ नागरिकले पाएभन्दा बढी राजनीतिक अधिकारहरु प्राप्त भएका छन् । सत्तामा कुन पार्टीको कुन मान्छे छ भन्ने कुरा गौण कुरा हो, प्रधान कुरा त जनताहरु राजनीतिक रुपमा सार्वभौम छन् कि छैनन् भन्ने कुरा हो । त्यसैले, नेपाली जनता राजनीतिक रुपमा समान र सार्वभौम छन् । तर, नागरिकको राजनीतिक अधिकारसँग उसको आर्थिक पक्ष पनि जोडिने गर्दछ । एउटा भोको मानिसले अघाएको मानिससँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसकेजस्तै आर्थिक रुपमा विपन्न र सम्पन्न नागरिकले समान रुपमा राजनीतिक अधिकार उपभोग गर्न सक्दैन । त्यसैले, अबको आन्दोलनको कार्यभार आर्थिक समानता हुनुपर्छ । सम्पन्नता र समृद्धिबिनाको समानताको कुनै मह¤व हुँदैन । त्यसैले, हरेक मानिससँग समृद्धिसहितको समानता आवश्यक छ । मुलुकको समृद्धि न कसैको चाहनाले हुन्छ, न कसैको सहयोगले नै प्राप्त हुन्छ । यो त आफूसँग भएका सबै श्रोत र साधनको वैज्ञानिक परिचालनबाट मात्र सम्भव हुन्छ । यो पनि केही सीमित नागरिकहरुको स्वामित्वसहितको परिचालनबाट मात्र सम्भव हुन्छ । यो राज्यको तीव्र इच्छाशक्ति र विशाल दृष्टिकोणबाट मात्र सम्भव छ । यसका लागि देशका युवाशक्तिलाई प्राकृतिक श्रोत र साधनको परिचालनमा अग्रसर बनाउनुपर्छ । सबै नागरिक, राजनीतिक दल र दलका नेतामा सामाजिक भावना हुनुपर्छ ।
त्यसैले, अहिले अठार वर्षपछिको फागुन १ मा यो प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुपर्छ कि सबै राजनीतिक दलहरुले आर्थिक समृद्धिका लागि राष्ट्रिय दृष्टिकोण बनाउनुपर्दछ । सबै नागरिकहरुले आर्थिक क्रान्तिलाई आफ्नो कार्यभार बनाउनुपर्दछ । यसले समाजवादी आन्दोलनको पूर्वाधार निर्माण गर्दछ, जसबाट समाजवादी लक्ष्यको दिशामा अघि बढ्न सहज हुन्छ ।